“Soomaaliya waxay haystaan Ictiraaf Ammaah ah,Somaliland-na Rasamaal dawladnimo oo Raan-dhiis leh” | Salaan Media
Home Wararka “Soomaaliya waxay haystaan Ictiraaf Ammaah ah,Somaliland-na Rasamaal dawladnimo oo Raan-dhiis leh”
“Soomaaliya waxay haystaan Ictiraaf Ammaah ah,Somaliland-na Rasamaal dawladnimo oo Raan-dhiis leh”
“Madaxweyne Siilaanyo waa ka soo dhaweeyay inuu qalin la saxeexdo Madaxweyne Soomaaliya ah oo u ogol inay siman yihiin”
Hargeysa (SM)- Wasiir Ku xigeenka Wasaaradda Warfaafinta, dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir (Cukuse) ayaa ka hadlay farqiga u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya, waxaanu tilmaamay inay Soomaaliya haystaan Ictiraaf amaah ah, halka Somaliland-na ay ku tun-tuunsatay dawladnimo raasamaal leh.
Wasiir Ku xigeenku waxa uu sidaasi ka sheegay kulan qado sharaf ah oo maanta xukuumadda Somaliland Huteelka Maansoor ee Magaaladda Hargeysa ugu samaysay in ka badan 70 xubnood oo ka kala socday qeybaha kala duwan ee warbaahinta, kaasi oo lagu faaqiday sida loo sii xoojin lahaa in saxaafaddu ay taageerto qaranimadda iyo himilooyinka qaranku hiigsanayo.
Wasiir Ku xigeenka oo ka hadlayay ujeedada kulankaasi waxa uu yidhi “Waxaan doonayaa inaan idiin sheego ujeedada kulankan aynu u qabanay horta Saxaafadda iyo Fanaaniintu meel ayay wax ka yara wadaagaan.Anigu in badan baan labadaba soo ahaayoo labadaba haddii la yidhaahdo waan ku casuunay shaki ayaa gala, waan ku casuumay mahadsanid uun baa ku xigta. Shaki inaad is geliso ma aha bacdaasi waa bac saxaafadda oo qudha ku kooban. Anigu haddii aan ku casuumo waan ku sharfay, waan kuu yeedhay xaqna waad iigu lahayd. Waynu isku nimid labadeenuba waynu is gacan qaadaynaa innagoo is jecel ayaynu wada qadaynaynaa waynu iska tagaynaa. Markaa maxaa bacdan keenay?”
Wasiir Ku xigeenka warfaafinta oo hadalkiisa sii watay waxa uu yidhi “Ta labaad Saxaafadda waan u mahad naqayaa, waxaanan ugu mahad naqayaa inay duruufteena la da’yihiin. Saxaafadda koriinkeedu Somaliland buu la da’yahay. Inkasta oo aad ogtihiin inay waxaynu qorayno ee aynu sii daynayno cabasho badani ka timaado oo marar badan aad maqashaan dadkeena oo leh Saxaafadda yaa naga qabta?. Haddan a dedaal badan bay saxaafaddu halkan ku soo gaadhay oo waan ku bogaadinayaa, wuuse iska jiraa mid mid xayraan ah oo innagu dhex jiraa.”
“Somaliland oo uu Axmed Maxamed Maxamuud (SIIlaanyo) Hoggaaminayo muxuu ku soo kordhiyay muddo laba sano iyo dheeraad ah, waa taas inaynu taas isha saarno oo toosh ku qabanyo muxuu soo kordhiyay?, iyadoo wixii ugu weynaa ee aynu doonaynay aqoonsi buu ahaaye’ halka uu soo gaadhsiiyay waa inaynu tooshka ku qabano ayaa ka wanaagsan inaad tooshka ku qabato cidhbaheenna, gondaheena iyo xaafadaheena,”ayuu yidhi Wasiir Ku xigeenka warfaafinta.
Wasiir Ku xigeenku waxa uu is bar-bar dhigay heerarka kala duwan ee ay kala taagan yihiin Somaliland iyo Soomaaliya, waxaanu yidhi “Maanta innaga iyo Soomaaliya muxuu ahaa farqiga u dhaxeeya labada madaxweyne.labada madaxweyne Mid Soomaaliya ayaa la yidhaahdaa marka uu diyaaradda fuulo ee uu dal kale la kulmo wuxuu la kulmaa maqaam madaxweyne waana la aqoonsan yahay saacadaas wuu qoslaa, wuxuu murugoodaa oo madoobaadaa marka uu Muqdisho ka soo dego waayo waxa uu garanayaa meeshaas inaanu dal dhisan iyo dawlad dhisani ka sii horayn.
Madaxweynaheenuna (Somaliland) waxa uu duulaa isagoo faraxsan , waxaanu soo degaa isagoo faraxsan oo og inuu dal dhisan iyo dad dhisan uu u imanayo faraqa inoo dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya waa kaasi.”
“Nalama Ictiraafin laakiin waxaanu haynaa raasamaal iyo dawladnimo ayaynu haynaa raandhiis leh, iyagana (Soomaaliya) waa la ictiraafay, ictiraafkaasi ayay hayaan oo ammaah ah. Waxay ila tahay tartan imika kuma jirno labadeena dhinac waxase aynu nahay laba dal oo walaalo ah oo danina ka dhaxayso, waan u ducaynaynaa Soomaaliya inay raasamaalkaas dawladnimo gaadhaan,”ayuu yidhi Mudane Cabdilaahi Cukuse.
Wasiir Ku xigeenku waxa uu sheegay in Madaxweyne Axmed Siilaanyo uu yahay Hoggaamiyihii u horeeyay ee Somaliland ee gaadha,kulanna la yeesha Raysal wasaareyaasha Britain iyo Turkiga.
“Waa Madaxweynaha soo dhaweeyay inuu qalin la saxeexdo madaxweyne Soomaaliya ah oo u ogol inay yihiin laba Madaxweyne oo siman. Markaa soo ma aha inaynu ku ixtiraamno oo aynu shiidka ka dayno saxaafad ahaan marka uu baxo soo ma aha. Waxaan leeyahay saxaafadda inanka askariga ah ee xuduuda jooga ayaad la mid tihiin. Waxaana la idinka doonayaa inaad qalinka ku difaacdaan,”ayuu yidhi Mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir (Cukuse).
Sidoo kale, Afhayeenka madaxtooyadda Somaliland Mudane Axmed Saleebaan Dhuxul oo ka hadlay kulankaasi ayaa suxufiyiintii shirka ka soo qeyb galay uga mahad celiyay siday u soo ajiibeen marti-qaadkii xukuumaddu u samaysay, isagoo arrintaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Anigoo ku hadlaya af-ka madaxtooyada Somaliland waxaan idiinka mahad naqayaa sidii wanaagsanayd ee wadniyada lahayd ee aad u soo bandhigeen dareenka shacabka iyo doonitaankeena. Tan aynu maanta halkan isugu nimina waxa weeyaan wixii wanaagsan ee inoo sookordhaa waa wax inaga wada dhexeey, qarankana qof malaha ee waa wax aynu wada leenahay dhamaanteen.”
“Qofku waxa uu qiimaysan yahay, qiimo-na ku yeelanayaa hadba qarankaas uu hoos jooga sawirka ka baxa ayuu ku qiimays naanayaa. Markaa waxaynu isku baarujinayanaa halkaa aynu maanta taaganahay waa marxalad u baahan in halkaa laga sii ambo qaado taageeraduna ay sii socoto, qadiyadeeanana aynu bar-bar istaagno,” Ayuu yidhi Mudane Dhuxul.
Afhayeenka oo hadalkiisa sii watay waxa uu yidhi “Madaxwaynuhu sidaad ogsoontihiin waxa uu joogaa dalka maraykanka, waxaanuu joogi doonaa in todobaad ku dhaw. Madaxwaynuhu inta uu joogo maraykan waxa uu la kulmi doonaa Hay’addo caalami ah oo uu ka jeedin doono xaalada dalkeena iyo marxaladihii uu soo maray.”
“Madaxwaynaha waxay is arki doonaan masuuliyiin sar-sare oo ka tirsan dawladda maraykanka. Madaxwaynuhu waxa uu la kulmi doonaa jaaliyada Somaliland ee ku dhaqan dalka maraykanka, kuwaas oo markii uu madaxwaynuhu dalkaas gaadhay si wayn u soo dhaweeyey,”ayuu intaas raaciyay Afhayeenku.
Waxa kale oo kulankaasi ka hadlay Guddoomiyaha Haatuf Media Group Yuusuf Cabdi Gaboobe, Guddoomiyaha Wargeyska Hubaal Cabdilaahi Aadan Cumar (Wayab), Tifafriraha Wargeyska Jamhuuriya Maxamed Cumar Cabdi (Cirro), Xuseen Cali Nuur oo ka mid ah odayaasha warbaahinta Somaliland iyo Weriye Saleebaan Cabdi Cali oo ka mid ah suxufiyiinta jiilka cusub, waxaanay dhammaantood ka warameen doorka warbaahinta iyo sida loogu baahan yahay in xukuumad iyo saxaafadba dhinac looga soo wada jeesto danaha qaranka Somaliland.